Cnc Yokuchinja Service - Anebon Metal Products Co., Ltd.
CNC hwokugaya hwakabvira Service
CNC Yokuchinja Service
Die vachikanda Parts
Chii CNC pakona?
CNC lathe chinhu mukuru-zvakarurama, mukuru-kushanda zvoga muchina chokushandisa. Vaine multi-chiteshi turret kana simba turret, muchina chokushandisa ane zvakawanda kubudiswa michina, unogona kubata Linear sepombi, diagonal sepombi, arcs uye siyana workpieces kunzwisisa dzakadai shinda uye grooves, pamwe Linear interpolation uye tenderera interpolation.
In CNC kuchinja, mashoko nembariro inoitwa muna Chuck uye zvayaitenderera paguyo, uye mudziyo wacho zvokudya panguva dzakasiyana, uye vazhinji zvitarisiko chishandiso zvinogona kushandiswa kusika achida chimiro. Kana pakati ane akatendeuka uye azvikuya mashandiro, unogona kumisa kutenderera kubvumira azvikuya vamwe zvitarisiko. Michina iyi kunoita kuti siyana maumbirwo, makuriro uye zvinhu mhando.
Zvokushandisa zviri CNC lathe uye kuchinja nzvimbo dziri akatasva ari turret. Tinoshandisa CNC controller ane "-chaihwo nguva" mudziyo (semuenzaniso Roupiyona), iro Anodzivisawo vachishandisa kutenderera uye anowedzera mamwe mabasa akadai kuchera, grooves uye azvikuya hukawanika.
Kana uchida CNC pakona, tiri mumwe kupfuura vanokwanisa uye competitively akatemerwa mutengo vagadziri. With 14 anoita yepamusoro otomatiki lathes, chikwata chedu zvinogona zvinhu zvakarurama uye nenguva. The siyana inoshandiswa nezvaanogona anobvumira Anebon kupa rakasiyana mharidzo zvikamu. kugadzirwa midziyo yedu vakawanda kunovimbisa yedu mukana wokushandiswa uye chivimbo. Uye tichapa zvidikanwi ose indasitiri tinoshumira pamwe zvakakwana inoomesera nemitemo. Tinotarisa yepamusoro uye vatengi.
CNC akatendeuka zvikamu isu kugadzira
Takaita aigadzira zvakawanda CNC akatendeuka zvikamu mumakore 10 uye ouinjiniya chikwata chedu kwagara inopiwa vatengi yedu kubatsira kugadzirisa zvinetso zvavo mukugadzira CNC akatendeuka zvikamu. We nechokwadi vagara yepamusoro machine, kunyange kana kunzwisisa zvikamu, achishandisa kunzwisisa muchina modules uye kushandisa unyanzvi CNC lathe kuti kushandisa muchina. Nekuti Anebon nguva dzose unopoteredza yakakwirira nemazvo!
Machine AUNGAITA IN CNC akatendeuka
With uno uye yakakwirira waivako midziyo yedu rine CNC pakona nzvimbo uye 4-akabatana wekushanduka michina . We inopa zvakasiyana siyana mukugadzira nzira. Ingava nyore kana kunzwisisa akatendeuka zvikamu, refu kana pfupi akatendeuka zvakarurama zvikamu, isu takashongedzerwa zvakanaka zvose kwevari kuoma.
Kumumvuri machine / razero dzino kugadzirwa
Small-batch mangé kugadzirwa
Kugadzirwa svikiro batch mangé hukuru
Zvinotevera vanachandagwinyira zvinhu dzinowanzoshandiswa: aruminiyamu, Stainless simbi, mhangura, zvinhu zvenaironi, simbi, acetal, polycarbonate, acrylic, nendarira, PTFE, titanium, ABS, PVC, ndarira etc.
yedu tsoka, leaderships, innoation, zvinogadzirwa
Shanyira Customer Our muGermany
Vatengi kubvira Europe akashanyira Anebon
Customer From Germany Visit The Company F ...
Anebon Hardware Co., Ltd. akawana ISO900 ...
Zvakarurama Uye Simba CNC Machine
Factory Environment muna Anebon
aruminiyamu kufa chakakandirwa , vachikanda zvikamu , kufa Kudzingwa zvikamu , aruminiyamu Kudzingwa, zingi ufe Kudzingwa zvikamu, aruminiyamu kufa Kudzingwa zvikamu ,